Lakulan – Nin maalin kasta shaqadiisa diyaarad ugu kicitima! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lakulan – Nin maalin kasta shaqadiisa diyaarad ugu kicitima!
Posted by: radio himilo July 30, 2017
Muqdisho – Haddii aad kamid tahay dadka qaar oo aalaaba ka cawda socdaalka maalinleed ee shaqadiisa, sheekadan waxay ugu yaraan ku gelinaysaa xaalad degan. Nin ku nool Los Angeles kaas oo ka shaqeeya San Francisco ayaa lixda saacadood ee safarkiisa shaqada ku qaata duullimaad diyaarad.
Previous: 30 July – Maalinta Caalamiga ee Saaxiibtinimada.
Next: Manchester United oo toddobaadka soo aadan dhamaystiraysa saxiixa Nemanja Matic.